कोभिड–१९ : सधैँ रहिरहन सक्छ – यो सँग हामीले कसरी बाँच्न सिक्न सक्छौँ? – Health Post Nepal
कोभिड–१९ : सधैँ रहिरहन सक्छ – यो सँग हामीले कसरी बाँच्न सिक्न सक्छौँ?
२०७८ साउन १७ गते १०:५३
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले महामारीका रूपमा वर्गीकरण गरेयता कोभिड–१९ बाट विश्वभर १८ करोड ५० लाख भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने ४० लाख भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।
ज्यानुअरीमा विज्ञान सम्बन्धी एक प्रमुख जर्नल नेचरले विश्वभरका १०० जना भन्दा बढी इम्युनोलोजिस्ट, भाइरोलोजिस्ट अनि स्वास्थ्य विज्ञहरूलाई सार्स कोभ– २ उन्मूलन गर्न सकिन्छ? भनेर सोधेको थियो।
लगभग ९० प्रतिशतले जवाफमा सकिन्न भन्ने उत्तर दिएका थिए।
दुर्भाग्यवश, हालसम्म विकास गरिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपले त्यस्तै प्रभाव पार्न सकेका छैनन्।
‘आज हामीसँग जुन खोप उपलब्ध छन् तीनले केही अवस्थामा सङ्क्रमणलाई रोक्दैनन्। तीनले सङ्क्रमणलाई परिमार्जन र रोगलाई कम गम्भीर भने बनाउँछन् । खोप लगाएका मानिसहरूले अरूलाई भाइरस सार्न सक्छन्,’ लन्डन स्कुल अफ हेल्थ एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनमा इन्फेक्सीअस डिजिज इपिडेमीओलोजीका प्राध्यापक डेभिड हेम्यानले भने।
‘कोभिड कहिल्यै जानेछैन उनी अनुमान गर्छन्।
हामीले खोप लगाए पनि नलगाए पनि जीवनभर पटक पटक सर्ने (भाइरस) कुरा अवश्यम्भावी छ।
कोभिड –१९ स्थानीय रूपमा रहिरहने रोग हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने कैयौँ विज्ञहरूमध्ये प्राध्यापक हेमान पनि एक हुन जसको अर्थ यो स–साना क्षेत्रमा कैयौँ वर्षसम्म सरिरहनेछ भन्ने हो।
कोभिड–१९ को अवस्था पनि भविष्यमा त्यस्तै हुने वैज्ञानिकहरूले अपेक्षा गरेका छन् र राजनीतिज्ञहरूले आशा गरेका छन्।
भाइरसको एउटा उद्देश्यु हुन्छ : सकेसम्म धेरै मानिसहरूमा फैलने जसका कारण उत्परिवर्तन हुनु सामान्य मानिन्छ।
जीव विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भाइरसमा उत्परिवर्तन हुनुपर्छ ताकि यो धेरै मानिसमा पुगोस्। धेरै सहज रूपमा फैलने भाइरस सफल भाइरस हो,अक्सफर्ड विश्वविद्यालय ग्लोबल हेल्थ विषयका प्राध्यापक ट्रुडी ल्याङ् बताउछिन।
यद्यपि ब्रिटेनको न्याशनल हेल्थ सिस्टम ९एनएचएस०ले जाडो मौसमअघि तीन करोड तेस्रो मात्रा वा बुस्टर लगाउने योजना बनाएको छ।
अमेरिकामा न्याशनल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थले बुस्टरले एन्टीबडी बढाउँछरबढाउँदैन र लामो समय सम्म सुरक्षा दिन्छरदिँदैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेकाहरूमा क्लिनिकल ट्रायल सुरु गरेको छ।
साँचो के हो भने कोभिड–१९ विरुद्धको खोपबाट विकास भएको प्रतिरोध प्रणालीले कति लामो समय काम गर्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूलाई पनि थाहा छैन।